China F800-9 * 60w doo ma na-asa mmanya na-akpụ akpụ ọkụ na pixel akara Manufacture na Factory | Banyere
F800-9 * 60w doo na-asa mmanya na-akpụ akpụ ọkụ na pixel akara
9 * 60w doo na-asa mmanya na-akpụ akpụ ọkụ na pixel akara bụ ọhụrụ ụdị ọkachamara linear ọkụ na mmanya ọkụ nke nwere ike ịga, wuru na elu nchapụta na ọhụrụ technology ngwa anya. O nwere ikike nkewa pikselụ ma melite ya na teknụzụ ntụpọ gbara gburugburu, nwere ike kpuchie ya na ọtụtụ mmụba ọkụ na-asacha mmetụta. Mmetụta ọkụ ọkụ na 3.5 Celsius dị warara, 40 Celsius obosara mepụtara ịsa ákwà mgbochi. Tilt mode na 270 Celsius, isi nke doo nwere ike siwing ekpe ma ọ bụ aka nri n'ime 35 Celsius nso, ka a ọkụ fixtures nwere na ano ọgaranya ike mmetụta na ogbo. N'agbanyeghị ọrụ dị ka ọkụ WASH ọkachamara, ejiri maka ọdịdị ogbo, ma ọ bụ rụọ ọrụ dị ka ọkụ ọkụ, ọ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma niile.
9 * 60w doo na-asa mmanya na-akpụ akpụ ọkụ na pixel akara
Nke a bụ nnwale na-agbanwe agbanwe iji mepụta ngwaahịa nwere oke ike dị otu n'ime ọkụ eletriki nwere ike ibugharị n'ụzọ kwụ ọtọ. Ọ bụghị naanị na ọ na-ejikwa ikpo ọkụ ahụ nke ọma, kamakwa na-edozi nguzozi nke isi nke ọma. Ike siri ike doo ọbụna mgbe ìhè niile duru, na-asacha mmetụta bụ zuru okè. Ihe nlere a gosipụtara emelite na oghere hexagon enweghị ike ịmepụta ebe ọkụ ọkụ, yabụ ọbụlagodi na ebe ndị ọkachamara, enwere ike ịrụ ọrụ ya nke ọma dịka ọkụ ọkụ ọkachamara.
Tilt onwem onwem na 3 adọ nzọụkwụ moto aga nso bụ 270 Celsius, n'ọnọdu ziri ezi na-aga were were. Isi nke osisi ahụ nwere ike ịgbagharị aka ekpe ma ọ bụ aka nri n'ime 35 Celsius .Richly agba na ụkpụrụ Marco ọrụ, ụdị ọrụ Marco nke 46 setịpụrụ na ụdị 38 ụdị ọrụ Marco setịpụrụ. Full ngwa anya ngalaba dimming, 65536-larịị dimming. A na-ejikọ nko ndị na-atụgharị akwụkwọ, n'ụzọ dị mfe maka ntinye.
Gbasara Anya Ihe owuwu
Isi mmalite ọkụ 9 * 60W RGBW 4in1 Dugara Ngosipụta: Ngosipụta agba agba 1.8 inch TFT na 180 Celsius na-agbanwe agbanwe
Mbugharị mbugharị 3.5 Celsius - 40 Celsius Data In / Out socket: 3 pin pin XLR sockets
Oriri Ike 650W Nchedo Ogo: IP20
Njikwa Pan / Tilt
Modkpụrụ Njikwa DMX512 / mater-Slave / Auto Run / Music / RDM Tilt 270 Celsius, izi ezi 0.86 Celsius / nzọụkwụ, ezi-n'iji ya gee ntị ziri ezi: 0.0034 Celsius
Ọnọdụ DMX 20/25/61 Kra Iji sistemu nrụpụta magnetik
Ọnọdụ 4 dimmer na igbu oge ma ọ bụ igbu oge, Flicker n'efu Dimension: 996 × 150 × 291mm
Ngwa ngwa ngwa 1 ~ 25Hz Net arọ: 19 kgs
Ikanam pikselụ Control Ọkọlọtọ ngwugwu: katọn; Ọnọdụ ụgbọ elu na nhọrọ
Saa & doo mmetụta kpamkpam ịgbanwee Asambodo
Isi nke osisi na-aga site na 35 Celsius site n'aka ekpe gaa n'aka nri OA & RoHS
Q: Kedu maka ọnọdụ mbukota nke ngwaahịa gị?
Re: Standard ngwugwu bụ mbupụ katọn (iji EPE juru n'ọnụ nke ọma ọkụ) na 5 oyi akwa katọn katọn
Ọnọdụ ụgbọ elu bụ nhọrọ ma ahaziri nke ọma
Q: Kedu usoro ụgbọ njem dị?
Re: Obere usoro na-ebupukarị Express (DHL, UPS, FedEx, TNT, wdg), Site Ikuku, Site n'oké osimiri ma ọ bụ Site na ụgbọ okporo ígwè.
Anyị ga-enye gị azịza kachasị mma dịka usoro gị na ịdị mkpa nke ịnata ngwongwo.
Ajụjụ: Ogologo oge ole ka oge ị ga-ewe?
Re: Ọ dabere n'usoro dị ukwuu, nke kachasị ụdị ire ere anyị na-edebe na ngwaahịa, yabụ ọ bụrụ na ị nye iwu maka ngwaahịa anyị abụghị nnukwu ọnụọgụ, ọ na-abụkarị na anyị nwere ngwaahịa na nnyefe oge dị n'ime ụbọchị 3 mgbe ịkwụchara ụgwọ.
Q: Ọ bụrụ na m chọrọ mgbanwe na sọftụwia nke ọkụ, ị nwere ike inyere m aka ime nke ahụ?
Re: Maka obere usoro, anyị na-anabata ịzụta ngwaahịa anyị, maka ịhazi oke anyị nwere ike ịlele yana nkọwa ma kpochapụ ihe ịchọrọ ịmegharị, ọ ga-anabata nke ọma.
Factory ngwongwo nzipu
Nke gara aga: Z68-splicing ogbo ọkụ n'èzí mbugharị par pikselụ mmetụta ọkụ
Osote: M52-ọkụ ọhụụ kachasị ike 24 * 60W Led bee eye moving head light
1940Z-King bia 19x40W duru asacha na-akpụ akpụ isi 4-i ...
760-7x60W doo anya na anu anya mmetụta ada movi ...
2720-IP65 n'èzí strobe mgbidi asacha ìhè bú ...
Elu àgwà n'èzí IP65 4x200w 800w COB Dugara b ...